Hiarovana ny ain’izy ireo sy hisorohana ny loza mety hitranga no antony. Raha ny fantatra, efa nisy nihotsaka kely ihany ity lalana ity teo aloha saingy tsy betsaka. Vao mainka niitatra anefa izy io vokatry ny ora-nikija ny faran’ny herinandro teo, antony nanapaka tanteraka ny lalana eny an-toerana. Tsy azon’ny fiara hampiasaina intsony ny fotodrafitrasa raha ny fanambarana nataon’ny fiadidian’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra, eny fa na ny bisikileta sy ny môtô aza. Efa manomboka moa ny asa fanamboarana ka aorian’izay vao afaka miverina amin’ny trano fonenany indray ireo fianakaviana miisa sivy ireo.